Xaaladaha Dhakhtarada Dimirka ee Somaliland – CAAFIMAADKA
Ururkan oo magaciisa la yidhaa Somaliland Mental Health Support Organisation ayaa xogtan nala wadaagay.
•	Waxa ay hadda ka dhisayaan cisbitaalka dhimirka ee Hargeysa oo ku kacay lacag gaadhaysa 85.000 dollar. Kaasi oo ay hadda raadinayaan qalabkii iyo dawooyinkii la dhigi lahaa.
•	Waxa ay noo sheegeen in aannu dhakhturku lahayn musqullo ay dumarku isticmaalaan balse ay hadda gacanta ku hayaan, nadaafaddiisuna ay markii hore aad u liidatay.
•	Dhanka cuntada waxa ay iska kaashadaan urur dalka gudihiisa ka shaqeeya oo Nasteexo la yidhaa. Waxaanay leeyihiin kaaniyoore sariibadda maalintii wareega oo soo ururiya cuntadii loo karin lahaa dadka dhakhtarka lagu hayo.
•	Waxa uu ururkani la shaqeeyaa cisbitaalka maanka ee magaalada Borama. Cisbitaalka Borama waxa ka shaqeeya 40 hablood oo 10 kiiba ay qaabilsan yihiin mid ka mid ah afarta xaafadood ee magaalada. Taasina waxa ay keentay in ay ka war hayaan oo ay daweeyaan dadka la ildaran xanuunadaa ha noqdeen kuwo dhakhtarka ku jira iyo kuwo guryahooda joogaba’e.
•	Waxa ay xaqiijiyeen in ay Borama tahay magaalooyinku ugu adeega fiican dhanka xarumaha lagu daweeyo dadka qaba cudurada maanka.
•	Cisbitaalka lagu daryeelo dadka qaba cudurada maanka ee Maandhaye ayaa haya oo daweeya dad gaadhaya 8000 qof oo isugu jira kuwo cisbitaalka ku jira iyo kuwo guryahooda lagu dabiibo.
•	Sida uu sheegay maamulaha cisbitaalka Dr Cabdinaasir Maxamed oo fiidiyow nala daawadsiiyay ka hadlayay, dadka deegaanka ku nool qiyaastii 10% ayaa qaba buu yidhi cudurada maanka (waalan).
•	Dhakhtarka culays weyn baa saaran oo waxa laysaga kala yimaaddaa deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sool, Sanaag iyo Togdheer.
•	Sidoo kale sida uu goobta ka sheegay mid ka mid ah diktooraddii munaasibaddan ka hadlayay, warbixin ay qaramada midoobay samaysay dhawaan ayaa muujinaysa in dadka Soomaalida ah 4 tii qofba uu midi la ildaran yahay xanuunka maskaxda. Taasi oo ay ugu wacan yihiin dagaalada iyo dhibaatooyinkii is xigay ee uu dadku soo maray. Sida uu dhakhtarku sheegay waalidu kaliya maaha in maryaha la dhigto, balse iyada oo qofku maryaha xidhan yahay ayuu siyaabo kale ula ildarnaan karaa xanuunkan.
•	Cisbitaalka Maandhaye ayaa shaqaynayay siddeedii sanno ee u danbeeyay.
•	Burco waa magaalada ay ku yaallaan iclaajyada ugu badan dalka.
•	Maamulka cisbitaalka maanka ee Gabiley ayaa sheegtay in ay ka la badan yihiin baahida jirta iyo awooddoodu. Waxaanay intaa raacisay in ay maalintiiba qaabilaan dad tiradoodu u dhaxayso 5 ilaa 10 qof.
Ururkan oo ka shaqeeya magaalooyinka Cardiff iyo Hargeysa ayaa si tabaruc ah u shaqeeya, dhaqaalaha uu ku socdana ka dhex ururiya bulshada. Waxa ay sheegeen in ay daasado dhigaan meheradaha iyo guryaha si qof kastaaba waxyar ugu rido. Waxa uu ururku hadda qorshaynayaa in uu noqdo mid caalami ah oo gaadha dalal badan. Si uu u noqdo urur si wadajir ah looga wada shaqeeyo. Masuuliyiintii ururkan ka socday oo kala ahaa, Aadan Cige Yuusuf, Iid Cali Salaan iyo Naasir Ciise Geeljire ayaa bulshada reer Stockholm ka codsaday in ay la shaqeeyaan oo ay waliba qayb ay Sweden leedahay aasaasaan. Nasiib wanaag isla goobtii waxa ay bulshada reer Somaliland ee Stockolm iska ururiyeen lacag door ah oo lagu dirayo koontaynarkii u horreeyay ee dawooyin iyo qalab caafimaad ah oo dalkii taga. Lacagta koontaynarka lagu qaadayo oo dhan 12.500 dollar ayaa inteedii badnayd isla goobta lagaga ballan qaaday, halka inta dhimanna loo ballamay.
Fiidiyow goobta lagu daawaday ayaa xanuun badnaa, waxaana ku jiray qoysas badan oo badi carruurtoodu la ildaran yihiin xanuunkan. Badi dadkanina waa kuwo faqiira oo aan xitaa dawo aan goyn karin. Bulsho ahaan waxa innala gudboon in aynu caawino. Haddii aad doonayso in aan gacan siiyo ururkan, kala xidhiidh halkan: Somalilandmentalhealth.com
Muuse M. Ciise (Dalmar)